Garoonka diyaaradaha oo warbaahinta laga mamnuucay xilli musharixiin culus ay kusoo wajahan yihiin Muqdisho - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Garoonka diyaaradaha oo warbaahinta laga mamnuucay xilli musharixiin culus ay kusoo wajahan yihiin Muqdisho
Warqad digniin ah oo kasoo baxday xafiiska Maareeyaha guud ee maamulka iyo amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa lagu wargeliyay dhamaan bahda saxaafadda in muddo 60 maalmood ah aysan soo gali karin garoonka, iyagoo aan wax fasax ah ka haysan maamulka garoonka.
Warqadaan oo loo qeybiyay dhamaan warbaahinadda gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba ayaa lagu war-geliyay inaysan amar la’aan kusoo geli karin gudaha garoonka, taas oo uu Maareeyuhu ku macneeyay inay jiraan arrimo khatar ku ah dhinaca ammaanka garoonka.
Sidoo kale, Maareeyaha garoonka ayaa dhamaan hay’addaha amniga garoonka, ciidanka AMISOM, kuwa Booliska, iyo NISA ku wargeliyay in gebi ahaan garoonka aysan soo gali karin dhamaan wariyeyaasha ka howlgala idaacadaha, iyagoo aan wax fasax ah ka haysan maamulka garoonka.
Dhinaca kale, warqadaan digniinta ah ayaa kusoo beegantay xilli magaalada Muqdisho ay kusoo wajahan yihiin madaxweynihii hore ee dowladii KMG ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo iyo ra’iisul wasaarihii hore Maxamed C/laahi Farmaajo, waxaana arrinkaan shaki weyn ay ku abuurtay dad fara-badan.
Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii ugu dambeysay waxaa magaalada Muqdisho ka soconaayay qaban-qaabadda soo dhaweynta madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kaas oo dhowr jeer hore dib uga dhacay safarkiisa uu ku imaan lahaa magaalada Muqdisho, waxaana haatan iska cad in madaxweyne Xasan Sheeekh uusan kalsooni isku qabin mar hadii uu tartanka markale soo galo Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Hadaba nuqul ka mid ah Warqadaasi oo soo gaaray warbaahinta Bulshoweyn ayaa u qornaa sida hoos ku xusan:-